सर्प हाम्रो लागि शत्रु नभएर मित्र पनि हो – Bannigadhi Today
कृष्ण चन्द २०७८ साउन २९, शुक्रबार १६:४२
सर्प भन्ने बित्तिकै हामी सबैमा एक प्रकारको डर पैदा हुन्छ। सर्पले डस्ने बित्तिकै मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने आम बुझाइका कारण हामीमा त्रास पैदा भएको हो । त्यसैले त गाउँघरतिर मानिसहरु सर्प देख्‍ने बित्तिकै मारिहाल्छन् । अझ भनौं, देख्‍ने बित्तिकै सर्पको टाउकोमा हान्छन् । सर्प हाम्रो लागि शत्रु नभएर मित्र पनि हो ।
हाम्रो पर्यावरणमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि सर्पको महत्त्व निकै ठूलो छ भन्ने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि यसलाई मार्न तम्सिनु मानव स्वभाव नै बनेको छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा २० हजारको संख्यामा सर्पदंशका घटनाहरु हुने गरेको छ । यस्तै, सर्पको टोकाईबाट बर्सेनि करिब हजारजना बढीले ज्यानै गुमाउने गरेका डब्लूएचओको तथ्यांक देखाउँछ ।
सर्पको टोकाइबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सर्पदंश व्यवस्थापन सम्बन्धिको कार्यविधि नै निकालेको छ । उक्त कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार सर्पदंशका अधिकांस घटनामा मानिसहरु आफ्नै कारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । घरेलु औषधि सेवन, अत्तालिएर र झारफुक अनि समयमा नै अस्पताल नपुर्‍याउँदा मानिसहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
नेपालमा हाल ८२ प्रजातिका सर्पहरु पाइने सर्प विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता करण साह बताउँछन् । तीमध्ये करिब २१ प्रजातिहरु विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्‍नेक(कर्कट नाग) सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् ।
सर्पलाई देख्‍ने बित्तिकै मार्ने क्रम विद्यमान भएपनि पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा ‘सर्पका साथी’हरुको उपस्थिति बढ्दै गइरहेको छ । उनीहरुको मुख्य काम भनेकै घर-कम्पाउन्डमा पसेका र घाइते सर्पको उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा छाडिदिनु हो ।
चितवनका ४४ वर्षीय यामलाल भण्डारीले सर्पको उद्धार तथा संरक्षणमा लागेको ६ वर्ष भयो । उनले घरमा पसेका र घाइते भएका सर्पको उद्धार तथा उपचार गरेर सुरक्षित वासस्थानमा पुर्‍याइदिने काम गर्दै आएका छन् । उनको सिको गर्दै १८ वर्षीय छोरी खुस्बु भण्डारी पनि सर्पको उद्धारमा लागि परेकी छन् ।
यो ६ वर्षको अवधिमा यामलालले हजारभन्दा बढी सर्पको उद्धार गरेको सुनाए । उनले १३ प्रजातिको सर्पलाई समातेर सुरक्षित स्थानमा छोडेको बताउँछन् । सबैभन्दा बढी उनले धामन र अजिंगरको उद्धार गरेका छन् ।
धामन विष रहित सर्प हो । मुख्य गरी यसले मुसा मन खान पराउँछ । त्यही भएर यसलाई ‘र्‍याट स्‍नेक’ पनि भनिन्छ । यो सर्प नेपालका लगभग अधिकांश स्थानमा पाइन्छ । यो सर्प घरआसपास तथा बारीमा धेरै पाइन्छ । त्यही भएर यसको बढी उद्धार आफूले गर्ने गरेको यामलाल बताउँछन् ।
धामन मानिस नजिकैको बस्तीमा बस्न रुचाउने सर्प हो । अन्य सर्पहरुको तुलानामा लामो र केही ठूलो हुने भएकाले यो धेरै देखिने गरेको प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत एवं हर्पिटोलोजिस्ट सन्तोष भट्टराई बताउँछन् । ‘यो घरको धुरीदेखि रुख पनि चढ्छ, मुसा खाना घरमा पनि जान्छ । गाउँको वरीपरी बस्न रुचाउने भएकाले यसलाई धेरै देखिन्छ,’ उनले भने ।
तराईका ओसिलो तथा सिम क्षेत्र अजिंगरको मुख्य बासस्थान हो । सिमसार आसपासमा यो बढी पाइन्छ । धेरैजसो कुखुराको खोर, गाईभैंसीको गोठ, धनसारबाट यामलालले अजिंगरको उद्धार गरेका छन् ।
उद्धार गरेका सर्पलाई उनले गाउँबस्तीभन्दा टाढा वनमा लगेर छाडिदिने गर्छन् । केही सर्पहरुलाई भने उनले वन कार्यालयको जिम्मा पनि लगाउने गरेका छन् । त्यस्ता सर्पलाई वन कार्यालयले नै सुरक्षित बासस्थानमा छाडिदिने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘पर्यावरण र वातावरण मिल्ने ठाउँमा उद्धार गरिएको सर्पलाई छाड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरण र पर्यावरणलाई सर्पले सन्तुलित राख्‍न सहयोग गर्छ । सामान्य रुपमा किसानले उत्पादन गरेको अन्न खाने मुसालाई खाइदिएर सर्पले सन्तुलन कायम गरिदिन्छ । त्यही भएर म उद्धार कार्यमा लागेँ ।’
यामलालको काम देखेर उनकी छोरी खुश्बु पनि उद्धारमा आकर्षित भएकी हुन् । छोरीलाई भने विष रहित सर्पको उद्धारमा मात्रै लगाउने गरेको उनले सुनाए .
क्याटेगोरी : मनाेरञ्जन, रोचक
देश चुकेको कहाँ हो ? सच्याउनुपर्ने के हो…
तौल कम गर्न खानुस् यी हरिया फलफूल र…
राज्यबाट उत्पिडनमा परेको एउटा विद्यार्थी : ‘म’